Umthandazo wokukhupha umntu omnye kuBomi bomnye | iiyure ezingama-24
kuqala » Imithandazo » Umthandazo wokususa umntu omnye ebomini bomnye
khangela awona anamandla umthandazo wokususa umntu ebomini bomnye okanye umntu ngendlela yakho? Yazi ukuba ukwindawo elungileyo, kuba sinemithandazo efanelekileyo yaloo njongo!
Uninzi lwabantu luzama ukutyhala abantu kude komnye ngenxa yezizathu ezahlukeneyo.
Kwiimeko ezininzi oku kudityaniswa nothando, kunye nabathandi kunye nabangcatshi, kodwa kukho nezinye iimeko apho lo mthandazo uluncedo.
Ukumka kwinkampani embi, abafowunelwa ababi okanye abantu abanomona kunokutshintsha ubomi bethu.
Kungenxa yezi zizathu ukuba kufuneka sithandaze lo mthandazo ngalo lonke ixesha kuyimfuneko.
Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi malunga namandla omthandazo, njani kwaye nini ukuwuthandaza, qhubeka ufunda inqaku lethu.
Kholelwa ukuba eli nqaku likumgangatho ogqithisileyo kwaye liya kubutshintsha ngokwenene ubomi bakho kwiiyure ezingama-24!
Yintoni injongo yalo mthandazo? Ngaba isebenza kuyo yonke into?
Umthandazo unenjongo elula kakhulu, tyhala abantu ababini esibaziyo.
Ikhetheke kakhulu kuba sinokuyenzela nabani na esiyifunayo, okanye kunoko, kubantu aba-2 esibafunayo, ngaphandle kokuba benze nantoni na.
Kukho abo basebenzisa umthandazo ukwahlukanisa umntu kubomi bomnye, ukwahlula izithandwa ezibini, ukwahlula indoda kubafazi abamfunayo okanye nokuba gcina abantwana kude neempembelelo ezimbi.
Khawube nomfanekiso wakho umntwana wakho ebona umntu omsa kwilizwe leziyobisi… Kufuneka uthandaze umthandazo!
Ngoku khawufane ucinge ukuba usibali wakho usondele kakhulu kumyeni wakho, ungathandaza umthandazo wokuba kude kancinci.
Ingena tyhala nabani kude komnye, nokuba bangubani na, akunamsebenzi nokuba yindoda, umfazi, umntwana okanye okwishumi elivisayo.
1) Umthandazo wokususa umntu omnye kubomi bomnye
Siza kwindawo apho sinikezela khona umthandazo kuwe, kodwa ngaphambi koko kubalulekile ukwazi into ebalulekileyo.
Umthandazo esiza kukubonisa wona ubhekiswa eSaint Cyprian.
Uyaziwa ngabantu abaninzi ngokwenza ububi, kodwa inyaniso kukuba wenza nje oko simcela ukuba akwenze.
Ukuba simcela okulungileyo kuphela, uya kusenzela okulungileyo kuphela, hayi okubi.
Ukuba ucela ububi kuye, unokwenza ububi, kodwa kulo mzekelo umthandazo wokususa umntu omnye ebomini bomnye awunanto yokwenza ububi.
Isebenza kuphela ukugxotha abantu abathandanayo ababini, abantu obaqhelileyo, abahlobo okanye usapho.
Ngenxa yoku, makathandaze engoyiki, engoyiki yaye engasoloko ecinga ukuba kukho into engahambi kakuhle.
Yiba nokholo kwaye ukholelwe kwiSaint Cyprian.
Umthandazo weSaint Cyprian wokwahlula umntu omnye komnye
“Ingcwele uCyprian, iSaint Cyprian, iSaint Cyprian,
Ndibiza igama lakho elinamandla amaxesha amathathu ukuze unike amandla aphindwe kathathu kulo mthandazo unamandla endiwuthandazayo kuwe ngokholo olukhulu entliziyweni yam.
Ndiyakucela, uCyprian oNgcwele, ukuba wahlule uZibani-bani 1 kuZibani-bani 2 ngokulula, ngokukhawuleza nangokuqinisekileyo.
Isiseko sesicelo sam silula, kukuphepha ububi obukhulu obunokuvela kobu budlelwane ngaphandle koluphi na uhlobo
I-Saint Cyprian, ndiyakucela ukuba usebenzise onke amandla akho, onke amandla akho kunye nayo yonke impembelelo yakho kumandla ukuze uphele kube kanye ngobuhlobo bakhe, kunye nokudibana kwakhe kunye nalo lonke umanyano lukaSibanibani noSo. -kwaye-ngokunjalo 1.
Aba bantu babini kufuneka bahlukane, kufuneka balandele iindlela ezahlukeneyo, enye ikude kwenye, kuba kuphela ngelo xesha baya kuba nako ukonwaba ngokwenene.
Ikwahlula-njalo-njalo-njalo-ngo-1, yenza iindlela zabo zichasane, yenza ubuhlobo babo (okanye uthando lwabo) bube buthathaka, bungenazo izibophelelo, ngaphandle kwezizathu zokuhlala zikhanyiswe kwaye zihlala.
Sebenzisa amandla akho eSaint Cyprian, sebenzisa amandla akho eSaint Cyprian, sebenzisa yonke into onayo emandleni akho ukwenza aba bantu babini basuke omnye komnye ngokuqinisekileyo."
Kwabo bangawaziyo umnikelo sisipho esinikwa ingcwele ethile ukwenza umthandazo ube namandla ngakumbi.
Kunyanzelekile, kodwa sicebisa ukuba wenze njalo njengoko kuya kunceda kakhulu ngeodolo yakho.
Apha kulo mthandazo wokwahlula abantu ababini, sincoma ukuba unike iSaint Cyprian ikhandlela elibomvu okanye elimhlophe.
ukuba iya ukwahlula abantu ababini kubudlelwane bothando banikezela ngekhandlela elibomvu.
Ukuba kungenxa ukwahlula umntu omnye komnye kubudlelwane bobuhlobo nikela ikhandlela elimhlophe.
Ukunikezela ikhandlela, thandaza nje umthandazo kwaye ukhanyise ikhandlela ekupheleni.
Ungakhanyisa ikhandlela ngaphakathi okanye ngaphandle.
Kukho abo bathanda ukuyikhanyisa egadini okanye efestileni.
Into ebalulekileyo kukunika ikhandlela eSaint Cyprian, akukhathaliseki nokuba ulikhanyisela phi.
Qaphela nje ukuba umnikelo uya kugqitywa kuphela xa ikhandlela ligqibile ukutshisa.
2) Umthandazo wokukhupha umntu endleleni yakho
Ngaba injongo yakho kukugxotha umntu, utshaba okanye umntu omaziyo endleleni yakho? Ngoko sinomthandazo onamandla kakhulu waloo njongo.
Ungayifumana ingaqhelekanga, kodwa imiselwe uThixo iNkosi yethu. Ufuna nje ukusibona kakuhle, ngaphandle kweempembelelo ezimbi kwaye kungekho negativity ebomini bethu. Ngoko masithandaze kuye ngamandla kakhulu nangeentliziyo zethu ezizele lukholo.
Eu (chaza igama lakho elipheleleyo) Ndiyathandaza namhlanje ndicela ukungenelela kukaThixo iNkosi yethu ebomini bam nakwikamva lam lonke.
Ndilandela iindlela zeNkosi yethu, iindlela ezilungileyo, ezilungileyo kunye nezilula, kodwa ndifuna uncedo lokukhupha abantu ababi kwaye bandenzakalisa.
Yiyo loo nto ndicela uncedo kuThixo uBawo, ukuba ndikhuphe (igama lomntu) ebomini bam ngokukhawuleza.
Umbi lomntu, negative ufuna ukundenzakalisa nje. Ufuna nje ukundibona ndimbi, ndilila, ndilusizi kwaye ndingenawo umnqweno wokuphila.
Yiyo loo nto ndicela ukuba igazi likaKristu lingene ebomini bam kwaye lihlambulule umzimba wam uphela kunye nomphefumlo wam uphela kube kanye!
Ndikholose ngamandla kaThixo uYise neNkosi yethu uYesu Krestu kwaye ndihlala ndiyigcina indlela yakhe.
3) Umthandazo wokugxotha utshaba okanye umntu ongachaphazelekanga
Ngaba kukho umntu "ongathandekiyo" ongafuni nje ukushiya ubomi bakho? Ngaba bubuhlobo, isoka lentombi yakho okanye i-ex yakhe? Ukuba kunjalo, kufuneka wenze okuthile ngokukhawuleza ukuze umkhuphe loo mntu ebomini bakho.
Lo mthandazo ufana kancinane nowokuqala wokukhupha umntu omnye ebomini bomnye, kodwa mfutshane.
Ngaba ukuthandazela ukususa umntu ebomini bomnye kuyingozi?
Njengoko besesitshilo, kukho abantu aboyikayo ukuthandaza lo mthandazo ngenxa yamandla amakhulu eSaint Cyprian.
Qaphela ukuba akayi kukwenza nto.
I-Saint Cyprian imbi kuphela ukuba wenza umthandazo ongendawo.
Kule meko umthandazo wokususa umntu omnye ebomini bomnye awunanto yakwenza nobubi.
Uya kubagxotha kuphela aba bantu ukuze balungelwe bona, ukuze bangabi nantlungu okanye bathabathe iintlungu ezingeyomfuneko.
Unokuthandaza nakwiSaint Cyprian, kholelwa ukuba uya kukunceda ngeyona ndlela ilungileyo!
Umthandazele ukuba akukhangele uphelelwe lithemba
Umthandazo wemiphefumlo elishumi elinesithathu esikelelekileyo yothando
Ngaba uwuthandile umthandazo wokususa umntu omnye kubomi bomnye ngoko nangoko okanye ufuna into eyahlukileyo?
Ngoku ekubeni wazi konke ngalo mthandazo, ungalibazisi ukuwuthandaza.
Ungaze ulibale ukuba ukholo lusisiseko sayo yonke into, ukuba unokholo, umthandazo uya kusebenza ngcono kunokuba ucinga.
Umnqweno omhle 🙂
1 Yintoni injongo yalo mthandazo? Ngaba isebenza kuyo yonke into?
2 1) Umthandazo wokususa umntu omnye kubomi bomnye
2.1 Umthandazo weSaint Cyprian wokwahlula umntu omnye komnye
2.2 Ukunikezela kwiSaint Cyprian
3 2) Umthandazo wokukhupha umntu endleleni yakho
4 3) Umthandazo wokugxotha utshaba okanye umntu ongachaphazelekanga
5 Ngaba ukuthandazela ukususa umntu ebomini bomnye kuyingozi?